हेलिकोप्टरबाट सामान लिएर पनि विकास गरिरहेका छौ (भिडियो सहित) « Anumodan National Daily
प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७७, शनिबार १३:००
बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिका छिमेकी देश चीनको तिव्वतसंग जोडिएको छ । सो पालिकाबाट मानासरोवर धार्मिक क्षेत्र जाने मार्ग बनाउन सके नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्ने विषय उठेको दशकौ भएको छ । तर पनि सडक निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन ।
२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसबाट युवा नेता राजेन्द्रबहादुर धामी सो गाउँपालिकाको अध्यक्ष छानिएका थिए । साविकको काडा गाविसलाई गाउँपालिकामा रुपान्तरण गरिएको सो गाउँपालिका १४७६ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको छ । दुर्गम क्षेत्र तर ठूलो भूगोल भएको यो गाउँपालिकामा हेलिकोप्टरबाट निर्माण सामाग्री लिएर भएपनि जनताको विकासको सपना पुरा गरेको दावी अध्यक्ष धामी गर्छन ।
भूगोल ठूलो भएपनि सो गाउँपालिकाको जनसंख्या दुई हजार ९६५ मात्र रहेको छ । प्रस्तुत छ ३९ वर्षीय अध्यक्ष धामीसंग विकास निर्माण लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी ।
अध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुँदा जनतासंग के के प्रतिवद्धता गर्नु भएको थियो ? के के पुरा गर्नुभयो ?
हामीले सञ्चार, विद्युत, सडक, झोलुंगे पुल निर्माणका साथसाथै स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने प्रतिवद्धता गरेका थियौ । नून र खाद्यान्न सस्तो र सुलभ बनाउने योजना पनि बनाएका थियौ ।
हामी आएपछि दुई दिनसम्म लगाएर भिस्याटबाट फोन गर्न गाउँपालिकाको केन्द्रमा आउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । ०७५ सालदेखि गाउँपालिकाका प्राय सबै नागरिकको हातहातमा मोबाइल पुगेको छ । गाउँपालिकाका सबै ठाउँमा विजुली बल्न थालेको छ । १० देखि २५ वाटका साना जलविद्युत आयोजना बनाउन जोड दिएकोले हाम्रो पालिकाबाट अन्धकार हटेको छ । चैनपुर–साइपाल सडक निर्माण भइरहेको छ । वडावडा जोड्ने चारवटा झोलुंगे पुल बन्दै छन् । अहिले व्यवस्थित छ वटा स्वास्थ्य संस्था बनेका छन् । १० सैप्याको अस्पताल बन्दै छ । आठ वटा विद्यालय पनि व्यवस्थितरुपमा चल्दै छन् । अहिले अन्यत्र गएर पढ्नु पर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।
प्रतिकिलो १५० पर्ने नून र १२० पर्ने चामल अहिले क्रमश ९ र ५० रुपियाँमा जनतालाई दिलाउन सफल भएका छौ ।
यो वीचमा खास गरेर सम्झनयोग्य काम के गर्नु भएको छ ?
मैले माथि पनि भने सञ्चार, विजुली, खाद्यान्न आफूर्तिमा निक्कै राम्रो उदाहरणीय काम गरेका छौ । एउटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थियो अहिले पाँच वडामा छ वटा स्वास्थ्य चौकी पुगाएका छौ । हाम्रोमा माध्यामिक विद्यालय थिएनन् अहिले तीनवटा मावि बनाइएका छौ । नीजि शिक्षकहरुको तलव गाउँँपालिकाले नै व्यहोरेको छ । सडक पुगाउन सके अझ राम्रो हुने छ । सडक निर्माणको गति बढाउन जरुरी छ ।
तपाईहरुले अहिलेसम्मको कामको समिक्षा कसरी कस्तो गर्नु भएको छ ?
हाम्रो आन्तरिक आम्दानी ३०/३५ लाख हो । यो पटक कोरोना महामारीको प्रभावले गर्दा ८/१० लाख मात्रै आम्दानी हुने अवस्था छ । समग्रमा सङघ र प्रदेशका विभिन्न अनुदान समेत गरेर हाम्रो वार्षिक बजेट २० करोड जति हो यस्तो कम बजेटमा पनि जनताको चित्त बुझाउन सकेका छौ ।
तपाईको पालिकालाई समृद्ध बनाउने अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना के के ल्याउनु भएकोे छ ?
साइपाल हिमालमा पर्यटक आउने वातावरण बनाउन गुरु योजना तयार गरेका छौ । खास गरेर पशुपालनबाट जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रयासमा छौ । च्याङग्रा, भेडा र चौरी पालन गर्ने र तिनको विक्री वितरण गर्नका लागि बजार खोज्दै छौ ।
साइपालको प्रचार प्रसार र समग्र पर्यटनको विकासमा के गरिरहनु भएको छ ?
मैले माथि पनि भने गुरु योजना बनाएका छौ । साइपाल आरोहण र अन्य सहजताका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । साथै तराईमा कैलालीबाट भारत र साइपाल हुँदै हिमालमा चीनको तिव्वतसंग सडक जोड्न सकेको भए धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्ने थियो । त्यसका लागि सङ्घ सरकारले सडक निर्माणमा तिब्रता दिनुपर्छ । हामीले पर्यटकलाई सजिलो बनाउन वडावडामा सूचना केन्द्रहरु स्थापना गरेका छौ । खान बस्न सजिलो होस भनेर होमस्टे सञ्चालनमा छन् ।
साइपाल गाउँपालिका जडीबुटीको भण्डार मानिन्छ कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ ?
जडीबुटी हाम्रो मुख्य आम्दानीको स्रोत छ । जडीवुटीको उचित उपयोग र विक्री वितरणमा गाउँपालिका भन्दा पनि सङ्घ र प्रदेश सरकार बढी जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । जडिबुटीको आम्दानी हामीले लिन पाउदैनौ खाली पर्चा काटेर थोरै रकम लिएर मात्रै पनि ३० लाख भन्दा बढी आम्दानी पाउने गरेका छौ । हाम्रोमा एक क्वीन्टल जति यार्चागुम्वा संकलन हुन्छ । कटुकी, सेतो चिनी, जटामासी, चिराइतो, वन लसुन जस्ता महत्वपूर्ण जडीवुटी हाम्रो गाउँपालिकामा पाइने गरेका छन् ।
गाउँपालिकाको समग्र विकास गर्नका लागि के कस्ता वाधा/अवरोध छन नि ?
ठूलो भूगोल छ । बस्ती छरिएका छन । हिउँदमा हिउँले र बर्षातमा अविरल वर्षाले विकासका काम गर्न कठिनाइ छ । विकट ठाउँ भएकोले विकास निर्माण गर्ने सामाग्री लैजान सहज छैन । हामीले सामाग्री ढुवानी गर्न हेलिकोप्टरको प्रयोग गरिहनु परेको छ ।
हेलिकोप्टर होस वा खच्चरबाट निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्दा धनगढी वा चैनपुरको दररेटमा सामान खरिद गरेर काम गर्न कठिनाइ छ । धनगढी वा चैनपुरको हिसावमा साइपालमा सामाग्री पुग्दा किनेको मूल्य भन्दा सामाग्रीको मूल्य तीन गुणासम्म बढी हुन्छ त्यसैले विकास निर्माण गर्दा सुगम र दुर्गमको दररेट फरक पारिनुपर्छ ।
विकास निर्माणमा चाहिने सामानको ढुवानीमा लाग्ने अतिरिक्त खर्चले हामीलाई काम गर्न गाह्रो मएको छ ।
अर्कोतिर हामीले शुरुदेखि नै पर्याप्त कर्मचारी पाएका छैनौ । अहिले पनि गाउँपालिका निमित्त कर्मचारीबाट चलेको छ । इन्जिनियर र चिकित्सक दुर्गम भएकोले हाम्रोमा जानै मान्दैनन् ।
विकासका कार्यमा प्रदेश र संघ सरकारसंग के कस्ता समन्वय भएका छन् ?
हामीले समन्वय गर्न खोजेका छौ । तर टाढाको पालिका भएकोले सोचे जस्तो नतिजा आउन सकेको छैन । प्रदेश र सङ्घ सरकारले विभिन्न खालका योजनाबाट गाउँपालिकाको विकासमा सहयोग गरिरहेका छन् । हालै मात्र पनि प्रदेश सरकार र हाम्रो गाउँपालिका मिलेर आँखा शिविर सञ्चालन गरेका छौ जस्ले गर्दा धेरैले राहत पाए ।
तपाईको पालिकामा नागरिकले विकासमा कत्तिको चासो राख्छन् ? र के के कुराको माग गर्छन ? कसरी ती माग पुरा गर्नुहुन्छ ?
खानेपानी, सडक, पुल, विजुली, सञ्चार र खाद्यान्नमा सहज पहुँचका लागि नागरिकले चाँसो राख्छन । हामीले थारै जनसंख्या भएकोले जनताका माग पुरा गर्न सकेका छौ जस्तो लाग्छ ।
अन्तमा चीनसंग सीमा जोडिएको तपाईको पालिकामा चीनतर्फबाट कुनै समस्या भोग्नु परेको छ कि ?
चीनबाट हामीले त्यस्तो समस्या भोगेका त छैनौ । तर सहज मौसम हुँदा ३/४ महिना सीमा क्षेत्रमा नै नेपाली सुरक्षाकर्मी बसेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले वडा नम्बर ४ मा सुरक्षाकर्मी बसेका छन् जहाँबाट सीमा क्षेत्र तीन दन टाढा छ ।
सीमामा सुरक्षाकर्मी बस्दा आफ्नो जमिनको रक्षा त हुन्छ नै जडीवुटी र वन्यजन्तुको अवैध व्यापार बन्द हुन्थ्यो । नेपाली जडीवुटी अवैधरुपमा तिव्वत जाँदा नेपालले धेरै राजश्व गुमाउनु परेको छ ।
जस्तो वनले यार्चाको प्रतिकिलो ३० हजार राजश्व उठाउछ । सुरक्षाकर्मी नहुँदा केही किलो मात्रै अवैधरुपमा तिवव्त जाँदा नेपाललाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ । गोरखापत्रबाट